Mampiasa Twitter ho an'ny fahazoana Lead | Martech Zone
Fampiasana Twitter ho an'ny fahazoana Lead
Alatsinainy Aprily 27, 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ny lafiny tokana tsara indrindra amin'ny Twitter amin'ny maha mpampita vaovao azy dia izay alalana-monina. Tsy mila manaraka ahy ianao ary tsy mila manaraka anao aho… tsy misy mandray tànana, tsy mahazo fankatoavana, tsy mila miditra an-tsehatra. Raha misy antony tsy itenenako anao na SPAM anao… na leo ny bitsika fotsiny ianao dia azonao atao ny manaraka. Tsy misy maratra ny olona iray - tsy misy manimba, tsy misy maharatsy.
Tamin'ity volana ity, Navy Vets hitifitra ireo mpampiasa 1,000 an-tserasera. Ity dia tambajotra sosialy ho an'ny veterana izay tompona sy ampiasain'ny veterans. Rehefa manomboka mihoatra ny fandaniana ny vola miditra ary voaloa ny vidin'ny fanombohana, dia manantena ny hanao NavyVets.com ho orinasa tsy mitady tombom-barotra izahay - miaraka amin'ny vola miditra rehetra dia haverina amin'ny Charities Veterans '.
Mba hitazomana ny vidiny ambany, dia nanao teti-bola kely dia kely momba ny doka isaky ny Click aho ary nampiroborobo ny tranokala araka izay tratra.
Omaly alina aho dia nanao zavatra somary hafa kely, hoy aho nanampy a Twitter NavyVets kaonty, nanampy ny feed feed ho an'ny kaonty Twitter mampiasa Twitterfeed, ary avy eo nitady sy nanaraka ny Navy Veterans tao amin'ny Twitter!
Asa mandany fotoana be io, fa rehefa afaka fotoana fohy dia nahita sy nanara-dia 40 aho Navy Veterans ao amin'ny Twitter. Mandefa hafatra amin'izy ireo miaraka amin'ny mombamomba ahy izy ireo hahafahan'izy ireo manamarina ny mombamomba ny Navy Vets. Ny ankamaroan'ny olona narahiko dia nihodina, nitsidika ny tamba-jotra Navy Vets, ary nangataka ny ho mpikambana! Tsy ny fomba mora indrindra ahazoana fitarihana, fa sady nandaitra no tsy nahasosotra an'iza tamin'iza mino aho fa fahombiazana io!
Fitaovana Twitter fanampiny
Ny mailaka azonao rehefa misy manaraka anao ao amin'ny Twitter dia taolana tsy mitongilana. Nisy olona tao amin'ny Twitter nitodika tany amin'ny Twimailer. Soloinao amin'ny adiresy mailaka Twimailer sy voila ny adiresy mailakao Twitter! Jereo ny sary eo ankavanana. Mahazo mailaka mampahalala be dia be ianao miaraka amin'ny sary, mombamomba ny mombamomba anao, bitsika farany, ary koa rohy haingana hanarahana, hanakanana na hitateranao ilay mpampiasa ho an'ny SPAM.
Koa satria ny bitsika ho an'ny daholobe dia azon'ny fikarohana atao, dia toa fomba iray mahafinaritra an'ity orinasa ity - tsy hoe fotsiny mihetsika amin'ny mpanjifa - fa kosa hifandray am-pahavitrihana amin'ny prospect!
Manana vokatra na serivisy tianao hampiroborobo ve ianao? SASANY fitaovana ho an'ny Twitter hamaly raha voatonona ny teny lakile ary / na faritana faritra jeografika manokana no voatondro. Mieritreritra aho fa mety ho somary manelingelina ity - soa ihany fa manolotra mekanisma tsy fidiny izy ireo. Nanandrana Tweetlater kelikely aho, fa tsy nahomby. Ny fanarahana ny kaonty twitter fotsiny dia fomba iray milamina sy mangina mirongatra ny kaonty amin'ny fizahana anao.
Ity dia manadihady ary teknika fanta-daza izy amin'ny fahazoana fitarihana amin'ny alàlan'ny loharanom-baovao. Ny fandinihana ny Twitter dia mety ho fitaovana lehibe hahitanao fitarihana vaovao ao amin'ny Twitter androany!
URL mora amin'ny tranokalanao miaraka amin'ny .htaccess
Ny endrika manan-danja indrindra amin'ny bilaoginao orinasa
Apr 28, 2009 ao amin'ny 6: PM PM
Inona araka ny hevitrao fa sarobidy aminao ny fotoana hikarohana, Doug? Mihevitra ve ianao fa ny "mpikaroka ao amin'ny Twitter" mety ho toerana voaloa?
Te-hahalala ny valiny amin'ity fandraisana andraikitra Naval ity aho.
Apr 28, 2009 ao amin'ny 8: PM PM
NavyVets dia ho tsy mitady tombom-barotra ary asa fitiavana ahy - Te hanana tranokalan'ny Veterans aho izay tena hikarakara ny Veterans fa tsy hanararaotra azy ireo hahazoana vola miditra amin'ny doka. Ka tsy dia azoko antoka hoe inona no soatoavina apetraka aminy! Azoko antoka fa hisy olona handoa an'io karazana asa io!